Ebumnuche ejiri maka mkpuchi mkpuchi ngwaahịa elektrọnik
A na -eji ngwaahịa elektrọnik eme ihe n'akụkụ niile nke ndụ, na ọtụtụ ngwaahịa elektrọnikị a ka a ga -ekpuchi tupu etinye ya n'ahịa. N'oge a, akụrụngwa mkpuchi mkpuchi ihe a na -ejikarị bụ igwe mkpuchi magnetron sputtering vacuum mkpuchi igwe. Ebe a, anyị na -abịa Leba anya na ebumnuche e ji agbasa asụ, ihe ebumnobi anyị na -eji abụghị ihe karịrị ụdị atọ: ihe mgbaru ọsọ metal, ihe mgbaru ọsọ alloy, na ngwakọta agwakọta..
Enwere ọtụtụ ebumnuche ejiri na diski ike. A na-ete ihe nkiri a na-eme ọtụtụ akwa n'elu ebe a na-edekọ ihe. Ihe nkiri ọ bụla nwere ọrụ nke ya. N'okpuru oyi akwa, 40nm oké chromium ma ọ bụ chromium alloy ga -plated iji kwalite nrapado na corrosion eguzogide. , Mgbe ahụ were platium cobalt cobalt 15nm kpuchie ya n'etiti, wee were ọla kọpa 35nm kpuchie ya, dị ka ihe ndọta, ihe a nwere ike gosipụta njirimara nke ndọta na nnyonye anya dị ala, n'ikpeazụ, were ihe nkiri carbon dị arọ 15nm kpuchie ya.
A na-ejikarị ihe mgbado ọkụ nke isi magnetik na-eme alloy-nickel alloy, na agbakwunyere ụfọdụ ihe ngwakọ ọhụrụ ka emechara, dị ka iron nitride, ígwè tantalum nitride, ígwè nitride ígwè, wdg, nke bụ ihe eji eme ihe nkiri magnetik dielectric dị elu niile.
CD diski ga -eji ihe nkiri aluminom dị ka oyi na -atụgharị uche ka a ga -etekwasị ya na arụ ọrụ plastik, mana maka diski CDROM na DVDROM, Enweghị ike iji ihe nkiri aluminom, n'ihi na a ga -enwe akwa nke e ji esiji ákwà na diski ndị a, na ihe dị na Aluminom na -emebi emebi ruo n'ókè ụfọdụ, a na -ejikwa ihe nkiri ọla edo ma ọ bụ ọla edo dochie ya.
A na -ejikwa ọtụtụ ihe nkiri emebe ihe nkiri nke diski anya. A na-ekpuchi ya na akwa nchara nke cobalt alloy 30nm na oyi akwa, nke agwakọtara na ihe mgbanwe ụwa na -adịghị ahụkebe, wee tinye ya na a 20 ruo 100nm oké silicon nitride dielectric layer. N'ikpeazụ kpuchie na aluminum reflective oyi akwa.
Ngwa eletrọnịkị ndị a chọrọ iji nweta ihe ndọta ma nwee ike ịdekọ data, iji nweta ọrụ ndị a, ka kwesịrị ịdabere na ihe nkiri ahụ ihe dị iche iche gbasasịrị, na usoro steeti kristal gosipụtara mgbe emechara fim ahụ..
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Otu esi akwadebe sputtering target
1.The sputtering akụrụngwa bụ mgbagwoju anya na-achọ a elu-voltaji ngwaọrụ: Uru nke cylindrical na planar magnetron sputtering zaa